२०७७ मङ्सिर १७ बुधबार ०३:००:००
सुरक्षा जोखिम भन्दै आफ्नै पार्टी कार्यालय गएनन् ओली, आठ महिनायता...
केपी ओली : यस्ता बैठकको कुनै अर्थ छैन, म व्यस्त छु आउँदिन
तपाईंको प्रस्ताव छलफलको विषय हुन सक्दैन । विधि, पद्धति, सहमति केही पनि पालना नगरी र कमिटीको पनि अनुमति नलिई एकल रूपले मनोमानी ढंगले प्रस्ताव ल्याउनुभएको छ । केवल द्वेष, ईष्र्या, आरोप, कुण्ठा लाञ्छनायुक्त पत्रका रूपमा आएको छ । पार्टीको साख गिराएर बदनाम गर्ने उद्देश्य छ, फिर्ता गर्नुस्, क्षमायाचना गर्नुस्, त्यसपछि बैठक अगाडि बढ्छ ।
तपाईंले लोगो प्रयोग गरेर पुस्तिका छाप्नुभएको छ, यो पार्टी विधान र पद्धतिको उल्लंघन हो । यसमा तपाईंमाथि किन कारबाही नगर्ने ?
तपाईंमाथि कारबाहीको प्रक्रिया अगाडि बढ्छ । क्षमायाचना गरेर आइन्दा यसो गर्दिनँ भनेर मात्र त्यसमा पुग्दैन, किनभने यो तपाईंको निजी पार्टी होइन । पार्टी कता लाने भन्नेबारे तपाईंहरूको नियत बुझेको छु । पार्टीलाई फाटो र विभाजनमा लैजान काम गरिरहनुभएको छ । पार्टी एकता गर्ने हो भने छलफल गरौँ, सहमति गरौँ । फुट–विभाजनतिरै जाने, सर्वनाशतिरै जाने हो भने यस्ता बैठककोे कुनै आवश्यकता छैन ।
पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड : नेताहरूले बैठक बसौँ भनेर पत्र लेख्नुपर्ने अवस्था आयो
पार्टीमा प्रस्तुत भएको प्रस्तावमा छलफलै हुँदैन भन्ने तपाईं को हो ? साथीहरू के भन्नुहुन्छ ? यहाँ यत्रो कमिटी र नेताहरू हुनुहुन्छ, के उहाँले भनेजस्तै छलफलै नगर्ने हो ? तपाईंले हामीलाई उत्तेजित बनाउने कोसिस गरिरहनुभएको छ, हामी उत्तेजित हुँदैनौँ, ठण्डा दिमागले सोच्छौँ र छलफल गरेर निष्कर्ष निकाल्छौँ । पार्टी एकताको रक्षा गर्छौँ र अगाडि बढ्छौँ ।
खासमा तपाईंले फायर खोलेपछि अन्तर्संघर्ष अहिलेको स्थितिमा आएको हो । हामीले स्थायी कमिटी निर्णय कार्यान्वयन भएन, बैठक बसौँ भनेका हौँ । नेताहरूले बैठक बसौँ भनेर अनुरोध गर्दा नमान्ने ? पत्र लेख्न बाध्य बनाउने ? अनि बैठक बसौँ, सहमति गरौँ भनेर सामूहिक रूपमा पत्र लेख्दा तपाईंले १० पेजको लाञ्छनायुक्त पत्र पठाउने ? यसपछि मैले अर्को पत्र पठाएर प्रस्ताव तयार पारेको हो । त्यसकारण फायर तपाईंले खोलेको हो । बालुवाटारमा बसेर तपाईंले गुटको खेती गरिरहनुभएको छ । प्रतिष्ठानबाट देशव्यापी रूपमा फुटको गतिविधि गरिरहनुभएको छ, अनि अरूलाई आरोप लगाउनुहुन्छ ?
माधव नेपाल : अब पूर्वएमाले र पूर्वमाओवादी भनेर पार्टी फुट्दैन
छलफल रोक्नुस् भन्ने तपाईं (ओली) को हो ? छलफल अघि बढ्छ । हाम्रो अन्तर्विरोध मित्रतापूर्ण हो । यो अन्तर्विरोधलाई दुस्मनीपूर्ण अन्तर्विरोध भनेर व्याख्या गरेर पार्टी विभाजनको आतंक सिर्जना गर्ने को हो ? पार्टी कसैको पेवा हो ? कसले फुटाउने पार्टी ? अब यो पार्टी पूर्वएमाले र पूर्वमाओवादी भनेर फुट्दैन । यो पार्टी कसैले फुटाउन पनि सक्दैन र फुटाउन पनि दिइन्न ।
सबै समस्याको जड केपीजीको व्यक्तिवाद, गुटवाद र अहंकार हो । त्यसकारण उहाँ नसच्चिएसम्म विश्वासको वातावरण बन्दैन । साँच्चै विश्वासको वातावरण बनाउन उहाँले आफूलाई सच्याउनुपर्छ तब मात्र छलफल सकारात्मक दिशातार्फ जान्छ । नत्र विधि र प्रक्रियाबाट निर्णय गर्नुपर्ने हुन्छ । समस्याको जड अरू कोही होइन, तपाईं (ओली) नै हो । पार्टीको बैठक बस्न नमान्ने, बैठकको निर्णय मान्दिनँ भन्ने र विधि र प्रक्रियालाई चुनौती दिने काम अहिले बन्द गर्नूस् । पार्टी कसैको पेवा होइन, सबैको सम्पत्ति हो । सामूहिक निर्णय लागू हुन्छ । व्यक्तिलाई हाबी हुन दिइँदैन ।